လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာ စစ်မှုထမ်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ရမယ့် ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များ | News Bar Myanmar
လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာ စစ်မှုထမ်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ရမယ့် ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံသားတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ အသက် ၂၈ နှစ် နောက်ဆုံးထားပြီး စစ်မှုထမ်းရတာ ကေဒရမ်မာပရိတ်သတ်တွေ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ ဒီနှစ်နဲ့နောက်နှစ်မှာ စစ်မှုထမ်းရမယ့် ၁၉၉၂-၉၃ မွေးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကတော့ တွေကတော့
1. EXO’s Chanyeol,Chen and Baekhyun
Suho စစ်ထဲဝင်ပြီးနောက်မှာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ဖွားတွေဖြစ်တဲ့ သူတို့သုံးဦးဟာ အခုဆိုအသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီး စစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ EXO အဖွဲ့ဝင်သုံးဦး စစ်မှုထမ်းနေတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာလဲ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ဖွားမို့ ဒီနှစ်မှာအသက် ၂၈ နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ BTS အဖွဲ့ရဲ့ အသက်အကြီးဆုံး အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာကြောင့် အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံး စစ်မှုထမ်းရမယ့်သူ ဖြစ်လာပါတယ်။ စစ်ထဲဝင်မယ့် ရက်အတိအကျတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Boyfriend, Moonlight စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ လက်ရှိမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မြင်နေတဲ့ မင်းသားချောလေး Park Bogum က ၁၉၉၃ ခုနှစ်ဖွားမို့ လက်ရှိမှာ အသက် ၂၇ ရှိပါပြီ။ လာမယ့်နှစ် နောက်ဆုံးထားပြီး စစ်မှုထမ်းရမှာပါ။
Are you human too ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ စက်ရုပ်လေးလို့ လူကြိုက်များတဲ့ မင်းသားလေးကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် စစ်မှုထမ်းရမယ့်အရွယ်ကို ရောက်နေပြီမို့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ၂ နှစ်ကြာ ခွဲခွာရဦးမှာပါပဲ။
လက်ရှိမှာ The King : Eternal Monarch ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဘုရင်ကြီးရဲ့ကိုယ်ရံတော်လေးဆိုပြီး လူကြိုက်များနေတဲ့ မင်းသားပါ။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ဖွားဖြစ်ပြီး အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်လို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရဖို့ နီးကပ်နေပါပြီ။
6. Kim Myung Soo(L)
Infinite အဖွဲ့ဝင်လဲဖြစ် အောင်မြင်တဲ့သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်လဲဖြစ်တဲ့ L ဟာ မင်းသားတွေရဲ့ ငယ်ဘဝနေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ရာကနေ ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်လာပြီး အခုဆို စစ်မှုထမ်းရမယ့်အရွယ်တောင် ရောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယမင်းသားကာရိုက်တာနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို အမြဲဂရုဏာသက်စေခဲ့တဲ့ Jisoo ကတော့ ၁၉၉၃ ခုနှစ် အစောပိုင်းမွေးတာမို့လို့ နောက်နှစ်စစ်မှုထမ်းမှာပါ။ စစ်ထဲမဝင်ခင် မင်းသမီး Im Soo Hyang နဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ဖို့ရှိတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
8. Jang Ki Yong
WWW, My Mister ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ရေပန်းစားလာတဲ့ ဒီမင်းသားချောကလဲ အသက် ၂၈ နှစ်ပြည့်ပြီမို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့် အရွယ်ရောက်ပါပြီ။ နှစ်နှစ် စစ်မှုထမ်းပြီးရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူးဖို့ရှိပါသေးတယ်။
source : 아이돌 연구소
Next Covid - 19 ကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့သူများအတွက် လှူဒါန်းမှုများ အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေသည့် IU »
Previous « EXO အဖွဲ့ဝင် Xiumin နဲ့ D.O. တို့ကို တောင်ကိုးရီးယားစစ်တပ်အထိမ်းအမှတ်သီချင်း ဖြစ်တဲ့ “The Promise of the Day” အတွက်ရွေးချယ်ခံရ